Isilivere eshicilelweyo yesikhafu abaxhasi kunye nefektri - China Isilk Shicilela Isikhafu Abavelisi
Uyilo lwefashoni isikhumba se-silk esibhityileyo
Xa unxibe isikhafu, ukhathalelo oluthambileyo noluthambileyo kwesikhumba, makhe uzive ukhululekile imini yonke. Ubungakanani obuyi-100% obuthunyelwe ngaphandle: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, isikwere, ubungakanani beethayile. Izinto eziphathekayo: i-100% ye-silika ye-mulberry, i-satin ecacileyo, i-12mm, i-14mm, i-16mm, ubunzima bokukhanya, ukuthamba, ukudibana kakuhle nolusu. Uyilo: Iintlobo ngeentlobo zoyilo olukrelekrele kunye neepateni eziprintiweyo ngononophelo (ushicilelo olukwicala elinye), imibala emihle eqaqambileyo, iipateni ezintle ezintle. Ukupakishwa kwebhokisi lesipho. Ifanelekile: I-Square bandana ...
Shawl ende enesikhafu
Abasetyhini logo isikhafu isikhafu isikhafu
Uyilo lwefashoni isilika yesikhafu shawl
Abafazi yedijithali yoshicilelo lwesilika
Isikhafu soshicilelo lwesilika
Uyilo olwahlukileyo isikhafu sesilika
Ifashoni yesikhafu yesikhafu
Yenza isikhafu isikhafu isikhafu